Waa Maxay Doorashada Dadban “Indirect election”? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed — February 8, 2017
Orator speaking from tribune and icons
Waqtiyadaan dambe waxaad maqashaa doorashada dadban, balse waa maxay doorashada dadban? Waxaan isku dayayaa inaan ka jawaabo su’aashaas jawaabteeda. Waa wax iska fudud oo ay cidwalbo fahmi karto doorashada noocaan oo kale. Waqtiyadaan dambe waxaa dhacda ummada Soomaaliyeed iskuma fahmaan luuqadooda hooyo, sawabtoo ah Soomaali badan ayaa qurbaha aaday oo ay kasoo bedelantay qaab-hadalka luuqada. Intooda badana waxay ku kala hadlaan luuqada kale duwan.
Doorashada dadban waxaa laga wadaa inaad qofka aad rabto doorato iyo waliba inaad doorani karto shaqsiga aad jeceshahay. Waa qaab wax loo doorani jiray qarniyo horre, illaa hadda dowladaha qaar ayaa isticmaallo. Waxayna u isticmalaan doorashada aqalka sarre iyo madaxweynaha.
Tags: Waa maxay doorashada dadban “Indirect election”?
Next post Soo Dhawaaw Mudane Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo -2017
Previous post Maanso Cajiib Ah: Ragaan Kala Didaayee Xilalka Doonaaya.